कोरोनाले लय बिगार्‍यो तर हामी उठ्छौँ::Nepali News Portal from Nepal
कोरोनाले लय बिगार्‍यो तर हामी उठ्छौँ
नयाँ वर्ष । अर्थात, नयाँ सपना । नयाँ जोश र जाँगर । वि.सं. २०७६ को पात्रो फेरिएको छ । नयाँ वर्ष २०७७ मा प्रवेश गरेका छौँ, हामी । पुराना वर्षमा के पायौं ? के पाएनौ भन्दापनि अबको गन्तव्य कस्तो बनाउने ? त्यसको महत्व ज्यादा हुनेगर्छ । महामारीको रुपमा फैलिई रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्व नै त्राही–त्राही भइरहेको बेलामा दैनिकी नै कष्टकर बन्दैं गइरहेको छ । यो अवस्थाको पार गर्दै कसरी अघि बढ्ने ? गण्डकी प्रदेश सरकारका आगामी योजना कस्ता छन् ? यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर ढोरपाटनले गरेको संवाद ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – मुख्यमन्त्री
गएको वर्ष खुसीमा थियौँ । अहिले दु ःखमा छौंँ । आगामी वर्षमा यसको व्यवस्थापन गरेर जानुप¥यो ।
सबैलाई थाहै छ ,अहिले विश्वभर फैलिई रहेको महामारीको सामना गरिरहेका छौँ । यसको रोकथाम र उपचारको चरणमा गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरिसकेको छ । हाम्रो प्रदेशमा दुई जना संक्रमित नै छन् । हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति, सामाथ्र्य स्रोत÷साधन यसैमा लगाएर काम गर्दैछौँ ।
यो ‘लकडाउन’को कारण सबै विकास निर्माणका कामहरु ठप्प छन् । उत्पादनको काम सबै ठप्प भयो । राजस्व स्वात्तै घट्छ होला । विदेशमा रहनु भएका गण्डकी प्रदेशबासी पनि अहिले ‘लकडाउन’मा हुनुहुन्छ । यसले हाम्रो अर्थिक बृद्धिदरमा नकारात्मक असर त पार्ने नै छ । गरिबी निवारणको अभियानमा, आर्थिक समृद्धिको अभियानमा यसले हामीलाई नकारात्मक असर पारेकै छ । यसको अध्ययन गर्नको लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । कोरोना भाइरसको कारण हामीलाई कत्तिको असर पारेको छ ? कति वर्ष हामी पछाडि धकेलियौँ ? यो सबै चिजको अध्ययन गर्न हामीले कार्यदल बनाएका हौँ । बजेट बनाउँदा, हाम्रो कार्यक्रम बनाउँदा कसरी अघि बढ्ने ? कसरी सामना गरेर जाने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्ने छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक भित्र सबै समस्याहरु पार गर्दै अघिबढ्ने भनेर योजना बनाई अघिबढ्ने छौँ ।
विकास लम्साल – उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री
अघिल्लो वर्षमा संरचना बनाएर, व्यवस्थित गर्नमै लाग्यौँ । पर्यटन गुरु योजना, भ्रमण वर्ष २०२० देखि २०२२ को योजना बनाएर उद्घाटन गरेका थियौँ । एकाएक कोरोना आयो । राष्ट्रको मात्र होइन विश्वकै चुनौति कोरोना बन्यो ।
जुन गतिमा हामी अघि बढिरहेका थियौँ,यो विषम परिस्थितिपछि नयाँ योजना बनाएर हामी अघि बढ्नु पर्नेछ । प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गरेर, नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । पर्यटन क्षेत्र त अहिले ध्वस्त नै भयो । लगानीहरु सुरक्षित गर्नुपर्ने छ । रोजगारीलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोडेर कसरी टिकाई राख्ने ? यो विषयमा हामीले सोच्दैछाँैं ।
एउटा सम्भावना हामीसँग के छ भने, हामी अझैं पनि कोरोनाको जोखिमदेखि बाहिर छौँ । भनौँ न, अन्य मुलूकमा जस्तो हाम्रोमा प्रभाव परेको छैन । यसलाई हामीले जोगाइराख्न सक्यौँ भने भोलि सुरक्षित गन्तव्य बन्नसक्छ । राम्रो पर्यटनको सम्भावना बन्नसक्छ । स्थानीय, अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिने उत्पादनमा जोड दिनेबारे हामीले सोचि रहेका छौँ ।
हरिबहादुर चुमान – आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा कसरी व्यवस्थित पार्न सकिन्छ भनेर नै हामी लागि परेका छौँ । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माण र इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकी स्थापना गर्ने भनेर बजेट छुट्याएका थियौँ । १६ वटा । १६ वटा मध्ये अहिलेसम्म ४ वटाको काम हुन सकेको छैन । १२ वटाको काम अघि बढिरहेको छ । ५ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय बाँकी चौकी हुन् । ४ वटा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको कारणले हुन सकिरहेको छैन । भन्नुको मतलब हामी प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा बलियो पार्न लागि रहेका छौँ ।
साढे दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर शुक्लागण्डकी नगरपालिका ढोरफिर्दीमा दंगा नियन्त्रण गण पनि बनाएका छौंँ । ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेका छौंँ । त्यसको लागि आवश्यक उपचकरण दिने भनेका थियौं । त्यो काम अघि बढी रहेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरीको गठन हुन्छ भनेर पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौं । तर, गण्डकी प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेन । त्यो रकम खर्च नहुने भयो । भर्खर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यो वर्ष गण्डकी प्रदेश प्रहरी पनि गठन हुन्छ । आगमी वर्षमा पनि प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा कसरी बलियो पार्न सकिन्छ भनेर हामी लागि रहनेछौँ ।
रामशरण बस्नेत – भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री
गत वर्षको बजेट बनाउदा एकदमै उत्साहसाथ बनाइयो । बजेट पनि एकदमै राम्रो ल्यायौँ । ८५ वटै स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको थियो । सडकका हुन् या खानेपानी, विद्युतलगायतका सबै , तीव्र गतिमा विकास निर्माणका काम भइरहेका थिए । विश्वभर फैलिइरहेको कोरोना भाइरसले गर्दा ंिसंगो मुलुक नै ‘लकडाउन’ भयो । हामी सबै यसबाट प्रभावित भएका छौँ । बन्न लागेका सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, आधाभूत खानेपानी योजना यो वर्ष पूरा गर्ने भनेर बनाइएको कार्यक्रम, यहीँ वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम, सिँगो विकास निर्माणका कामहरु नै प्रभावित बनेको छ ।
अहिले पनि हामी ‘लकडाउन’ मै छौँ । यो कति लम्बिन्छ भन्ने हामीलाई अझैंसम्म पनि थाहा छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने भनेर हामी लागि रहेका थियौँ । तर, यो महामारीका कारण हामीले ल्याएका योजनाहरु पूरा हुन पाएन् । विकास निर्माणका कामहरु पछि पर्ने स्थिति देखा परेको छ । विकास निर्माणले गति नलिँदा गण्डकी प्रदेशलाई असर पार्नेछ । तर, यसपछिका दिनमा विकास निर्माणका कामदेखि गण्डकी प्रदेशलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर हामी लाग्ने नै छौँ ।
लेखबहादुर थापा – भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
गएको वर्षमा हामी उत्पादनमै केन्द्रित रह्यौँ । उत्पादनसँग सम्बन्धित काममा जिल्लाबाट कृषि ज्ञान केन्द्र बिक्री केन्द्रबाट खाद्य तथा बिक्री वितरण गर्ने । पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनसम्बन्धि काम जिल्लाबाट अघि बढाइएको छ । पशुपंक्षी तथा खाद्य उत्पादनदेखि मन्त्रालयबाट ऐन, कानुन निर्माण गर्ने काम भए ।
मन्त्रालयबाट भएका महत्वपूर्ण काममा जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने काम अघिबढेको छ । सहकारीसँग जोडिएका कामहरु कृषकलाई सपोर्ट गर्ने काम भइरहेका छन् । यस्ता थुप्रो कामहरु मन्त्रालयबाट गएको वर्षमा भए । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसले यतिबेला हामीसँगै आक्रान्त छौँ । लकडाउनले गर्दा कोही पनि घरदेखि बाहिर निस्किन पाई रहेका छैनौँ । अबको हाम्रो योजना भनेको, कृषि उत्पादन बढाएर प्रदेशलाई कृषिमा आन्तनिर्भर बनाउने नै हुनेछ ।
नरदेवि पुन – सामाजिक विकासमन्त्री
आगामी वर्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्न पनि पाइएको छैन । कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने ? कसरी बचाउने ? त्यसको तयारी मै हामी व्यस्त छौँ । गएको वर्षमा के ग¥यौँ भनेर भन्दा पनि हामी अहिले यो महामारीबाट कसरी बच्ने त्यसैमा लागिरहेका छौँ ।